Usengozini umnotho waseThekwini ngoba isenkulu ingozi yezikhukhula ngaphandle uma kutholakala isisombululo ngokushesha. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Yizinkulungwane zamabhizinisi ezisezindaweni ezisengozini yezikhukhula eThekwini, KwaZulu-Natali
Izithombe: wuGoogle nezithunyelwe
Usengozini umnotho waseThekwini ngoba isenkulu ingozi yezikhukhula ngaphandle uma kutholakala isisombululo ngokushesha. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUZOTHATHA izinyanga ezintathu ngaphambi kokuthi umnotho waseThekwini usebenze ngendlela obusebenza ngayo ngaphambi kokuhlasela kwezikhukhula ezibhoke ngesonto eledlule. Loku kulindeleke ukuthi kwehlise umnotho wedolobha ngo-1.8% njengoba idolobha lilahlekelwa wuR28 million ngosuku ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi ungakabalwa umonakalo owenzeke kwingqalasizinda.
Lezi zibalo zidalulwe wuDkt u-Ajiv Maharaj, iPhini leNhloko ye-Economic Research, Strategy and Innovation kuMasipala waseThekwini namhlanje. UDkt uMaharaj uthe lezi zikhukhula, ezibulale abantu abawu-435 kwathi izinkulungwane zasala dengwane, yizona zikhukhula ezishaye kwezwela ngaphezu kwazo zonke iziwombe ezine zokugcina zezikhukhula.
“Izikhukhula ezintathu kwezine ezinkulu ezihlaselile zenzeke phakathi no-Ephreli, nokungesona isikhathi sezimvula ezinkulu okuwuSepthemba. Kuyadingeka sibambisane futhi sibhunge ngokuthi sizomelana kanjani nengozi yezikhukhula ngoba isenkulu,” kusho yena.
Esewonke amabhizinisi akhe ezindaweni ezisengozini yokuhlaselwa yizikhukhula eThekwini awu-1 152 kanti imali eqoqwa yidolobha (ama-rates) nesengozini wuR513.2 million. Kusukela ngo-Ephreli 14 idolobha selilahlekelwe wuR737m.
Ngezikhukhula zango-2017 umnotho wedolobha walahlekelwa wuR172m, kwathi ngezahlasela ngo-2019 walahlekelwa wuR440m.
U-Maharaj uthe ucwaningo abasalwenzile nabamabhizinisi luveze ukuthi into enkulu edingwa wosomabhizinisi ngamanzi, ugesi, ukulungisa imigwaqo, ukuvuselela ithemba embonini yezokuvakasha, imali yokulungisa imishini ephukile nokuqashwa kwabantu ngohlelo iPresidential Employment Programme ukusiza ukulungisa amahhovisi.
Awu-110 amabhizinisini amancane athintekile kanti iMeya yaseThekwini uMnu uMxolisi Kaunda ithe azodinga uR20m ukuvuselela umsebenzi.
“Sesiqalile ukuxoxisana nohulumeni kazwelonke ukuze sibone ukuthi singawasiza kanjani amabhizinisi athintekile. Kuyadingeka ukuth sithole izisombululo ezizosisiza ukumelana nezinselelo zokuguquguquka kwesimo sezulu,” kusho uKaunda.
Imeya yaseThekwini uMnu uKaunda
Isikhulu esiphezulu seDurban Chamber of Commerce and Industry uNkk uPalesa Phili sithe izizinda zamabhizinisi ezidinga kuphuthunyiswe ukulungisa amanzi kuzona yiseMhlanga, eCornubia, eProspecton, eBluff, eHammarsdale, ePhoenix Industrial Park, eMngeni Business Park naseSouthdale.
UNkk uPhili, isikhulu seDurban Chamber of Commerce and Industry
“Isicelo sethu wukuthi sifisa ukubona uhlelo idolobha elinalo lokumelana nezikhukhula ukugwema umonakalo ofana nalona esibhekene nawo manje. Asikwazi ukuba nalesi simo minyaka yonke,” kusho yena.
Uthe bayafisa ukuthi umasipala ubheke ubuchwepheshe elinye lamalungu abo eliqhamuke nawo elikwazi ukulungisa imigodi emigwaqweni ngokushesha njengoba ethe umgwaqo ukwazi ukuthi usetshenziswe emva kwamahora amathathu ulungisiwe.
Isikhulu esiphezulu seSouth African Property Owners’ Association uMnu uNeil Gopal sinxuse ukuthi umasipala ubuyekeze isabelo sengqalasizinda kwisabelomali.
Bawu-220 osomabhizinisi umasipala obubachazela ngomphumela omubi wezikhukhula kwezomnotho.
U-Maharaj uthe kuzofanele kusetshenzwe ngokuzikhandla ukugqugquzela nezokuvakasha njengoba kuzoba ne-Africa Travel Indaba ngenyanga ezayo.
Usezuze lukhulu unjiniyela ogxile ekuphuculeni impilo yabantu. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA